भूकम्प को थप क्षति बाट बांच्न के के गर्ने ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
भूकम्प को थप क्षति बाट बांच्न के के गर्ने !
प्रकाशित मिति: १४ बैशाख २०७२, सोमबार
९. प्राकृतिकरुपमा भूकम्प जानुबाट आफै मा धनजनको क्षति हुँदैन। तर खराब भवन, संरचना इतर उपायहरुको अभाव र सचेतनाको अभावजस्ता असुरक्षित प्रचलनहरु संकटका कारण हुन्। त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्दछ।